Wararkii ugu dambeeyay Kulamada ka socda Dhuusamareeb - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay Kulamada ka socda Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyay Kulamada ka socda Dhuusamareeb
Kulamo Siyaasadeed oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa Khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa Caawa ka socda Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Kulamaddaan ayaa ah kuwo la doonaayo in xildhibaanada Ahlusunno lagu qanciyo in ay dib ugu soo laabtaan Guddiga doorashadda Galmudug oo ay maanta ka baxeen.
Khilaafka ka taagan doorashadda madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa xoogeystay ka dib markii Ahlusunna ay si weyn uga soo horjeestay Falalka dowladda Soomaaliya ay ka waddo Dhuusamareeb.
Bayaan kasoo baxay Xafiiska Madaxa Xukuumadda Galmudug ayaa lagu Cadeeyay in aysan qeyb ka aheyn Doorashada boobka ah ee DFS ay dooneyso in maamul loogu dhigo Galmudug.
Ahlusunna waxa ay caddeysay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay soo xushay Xildhibaanada Galmudug 69 ka mid ah,islamarkaana loo diiday Odayaasha dhaqanka in ay soo xulaan.
Waxa ay sheegeen Ahlusunna in aysan qeyb ka ahaan doonin dhismaha maamulka Galmudug ee hadda socda, waxaana ay ugu baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshadda Shir looga hadlaayo dhismaha Galmudug.
Previous articleGudoomiyihii hore ee degmada Qandala oo Boosaso lagu dilay
Next articleNISA oo soo bandhigtay Fanaan sheegtay in uu ka tirsan yahay Shabaab